पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन ! आजको राशिफल : बि.सं. २०७४ साल फाल्गुन ११ गते शुक्रबार तदानुसार फेब्रुवरी २३ तारीख « Light Nepal
पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन ! आजको राशिफल : बि.सं. २०७४ साल फाल्गुन ११ गते शुक्रबार तदानुसार फेब्रुवरी २३ तारीख
Published On : 22 February, 2018 11:54 pm
आज श्री शाके १९३९ बि.स. २०७४ साल फाल्गुन ११ गते शुक्रबार इश्वी सन २०१८ फेब्रुवरी २३ तारीख फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथी चन्द्रमा वृष राशिमा सुर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु अष्टमीव्रत गोरखकाली पूजा होलिकारम्भ चिरोत्थान चिरस्वाय – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे
बादबीवाद को झमेलामा फस्न सक्ने सम्भाबना रहेको छ । तपाईको बाणीकोगलत अर्थ लाग्न सक्छ बोल्दा होशपूर्याउनु होला । प्रियजनको स्वास्थमा सामान्य खराबि आउनाले मानसीक समस्या आईपर्न सक्नेछ ।
मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा गरीरहेको काममा बिशेष फाइदा प्राप्त हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षामतामा बृद्यि हुनेछ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्या ले सताउला । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगले मन प्रशन्न रहला ।
आर्थीक क्षेत्र मध्यम रहनेछ । पतिपक्क्षीहरु सबल रहनाले कार्य सम्पादनमा झन्झट ब्यर्होनु पर्ला । नयाँ कार्यको थालनिले मन प्रशन्न रहला । बिद्या प्राप्ति योग तथा बौधिक बिकाश हुने समय रहेकोछ ।
तपाईको कार्यको फल अरुलाई सहजै प्राप्त हुनाले मनमा खिन्नता उत्पन्न हुनेछ । खानपानमा ध्यान दिनु होला । स्वास्थमा देखा परेको गढबढीले कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न गराउला ।
जिबन साथीको सहयोगमा गरीएका कार्यहरुमा सफलता हात लाग्नेछन । लगानिको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । भोज भतेरमा सरीक हुने अबसर जुट्नेछ । कार्य सम्पादनमा लगाईएको लगनसीलताको राम्रो कदर हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ ।
अपरीपक्क निर्णयले तपाई लाई गलत साबित गर्न सक्नेछ । सामान्य आर्थिक अभाबको सामना गर्नु पर्नेछ । यात्रा खर्च दायक रहनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । आफ्नु लापरवाहिले धनमालको क्षति हुन सक्नेछ ।
बिद्या प्राप्तिको रहेको छ । पारीबारिक मनोरञ्जका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहने छ । आफु भन्दा सानोको सहयोगमा गरिएका कामहरु दीगो फाईदा मुलक साबित हुनेछन । सामाजीक कार्यका निम्ति साधारण खर्च हुन सक्नेछ ।
पारीवारिक झोरझमेलाले सताउन सक्नेछ । अरुको दबाबको अनुभब हुन सक्नेछ । सभा सम्मेलनमा सरीक हुने अबसर जुट्नेछ । कार्य सम्पादनमा भएका सामाय त्रुटिले अपजसको सामना गनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ ।